'जलविद्युत् क्षेत्र अर्थ मन्त्रीकाे पेवा हाेइन' - UrjaKhabar 'जलविद्युत् क्षेत्र अर्थ मन्त्रीकाे पेवा हाेइन' - UrjaKhabar
‘जलविद्युत् क्षेत्र अर्थ मन्त्रीकाे पेवा हाेइन’
काठमाडाैं । अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार (जेठ १५ गते) संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे बजेट प्रस्तुत गरे । जलविद्युत् लगायत अर्थतन्त्रका सूचकहरू ओरालाे लागेकाे समयमा केही राहतका प्याकेज आउने अपेक्षा थियाे । अझ जलविद्युत् प्रवद्धकले त पुनरुत्थानकाे कार्यक्रमकाे आशा गरेका थिए । तर, सारा उर्जा क्षेत्रलाइ निराश पार्ने गरी बजेट आयाे । काेराेना भाइरस र यसकाे असरबाट जाेगिन सरकारले गरेकाे लकडाउनकाे समयमा दर्जनाैं आयाेजनाकाे काम राेकिएकाे छ ।
निर्माणाधीन ३ हजार मेगावाटका आयाेजनाकाे निर्माण अवधि झन्डै २ वर्ष धकेलिएकाे छ । यस्ताे प्रतिकूल समयमा निजी क्षेत्रका लागि केही न केही राहतका कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक थियाे । तर, सरकारले यसतर्फ साेच्नसम्म भ्याएन वा बदनियत राखी निजी क्षेत्रलाइ पाखा लगाइयाे । देशबाट लाेडसेडिङ हट्याे । निजी क्षेत्र चाहिँदै सरकारकै उत्पादनले पुग्छ भन्ने मनाेवृतिकाे विकास हुनुले समृद्धिकाे मार्गचित्र देखाउँदैन ।
जलविद्युत् क्षेत्र (विकास) अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाको व्यक्तिगत पेवा होइन । यो राष्ट्रको विकाससँग गाँसिएको छ । यसाे हुँदा याे क्षेत्रले बजेटमा प्राथमिकता पाउनुपर्थ्यो । तर, सरकारले यसलाई कुनै पनि दृष्टिकेणबाट प्राथमिकतामा राखेन । यसले सरकारसँग जलविद्युत् प्रवर्द्धन गर्ने आधारभूत सिद्धान्त नभएको बुझिन्छ । यही कारण जलविद्युत्बाट हुने फाइदालाई पनि बेवास्ता गरिएको छ । ग्यासमा थप लगानीको व्यवस्था गरिएको छ । जबकि, ग्यास विस्थापन गर्न बिजुली चाहिन्छ ।
जलविद्युत् प्रवर्द्धकले असिमित सुविधा मागेका छैनन् । नगद सहयाेग पनि मागेका छैनन् । अयाेजनामा लगानी थपिदिन भनेके छैनन् । कम्तीमा कोभिड-१९ ले जलविद्युत्मा परेको असर त न्यूनिकरन गरिदिनुपर्यो ।
ग्यास विस्थापित गर्ने ठूलाे परिमाणकाे बिजुली जलविद्युत्बाट मात्र सम्भव हुन्छ । बजेटले जलविद्युत्लाई उपेक्षा गर्याे । अहिलेको समयमा विदेशी मुद्रा बचत गरी व्यापार घाटा कम गर्ने राष्ट्रको एकमात्र स्राेत बिजुली हो । बिजुलीले ग्यास विस्थापित गरी राष्ट्रको क्रयशक्ति बढउँछ । कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा सुधार ल्याउँछ । यो नेपालको लागि ध्रुवसत्य हो तर किन जलविद्युत्लाई उपेक्षा गरियाे बुझ्न सकिएन।
हाम्रो बिडम्बना हो, अझ भन्नूपर्दा राष्ट्रको दुर्भाग्य । बिजुलीको प्रयोग बढाएर राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउनुपर्नेमा उपयोग खुम्च्याउन खोजिएको छ, बजेटमा । अधिकतम उपयोगपछि मात्र बिजुलीबाट सञ्चालन हुने वस्तुको मूल्य तथा बिजुलीको दर/रेट तय हुनुपर्छ । तर, बजेटले बिजुलीको प्रयोग गर्न नै बञ्चित गर्ने स्थिति पैदा गराइदिइको छ ।
जलविद्युत् प्रवर्द्धकले असिमित सुविधा मागेका छैनन् । नगद सहयाेग पनि मागेका छैनन् । अयाेजनामा लगानी थपिदिन भनेके छैनन् । कम्तीमा कोभिड-१९ ले जलविद्युत्मा परेको असर त न्यूनिकरन गरिदिनुपर्यो । अर्थ मन्त्रीले विषम परिस्थिति मनन् गरी ब्याजदर तथा पुनरकर्जामा सहुलियत दिनुपर्थ्याे । बढीभन्दा बढी बिजुली उपयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्थ्याे । रुग्ण भएका जलविद्युत् अयेजनालाई के गर्न सकिन्छ ? त्यो सम्बोधन गरिदिनपर्यो र अघिल्ला सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरिदिनुपर्यो ।
आखिर जलविद्युत् भनेको राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । जसले जे भने पनि राष्ट्रको विकास र जिडिपीमा सुधार गर्ने तथा ग्यास विस्तापितकाे प्रमुख अधार बिजुली नै हाे । विदेशी मुद्रा जोगाउने एकमात्र उद्याेग जलविद्युत् नै हाे भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । हामी सबै नेपाली जलविद्युत् उद्योगमा निर्भर भएको परिवेश ऐना जस्तो छर्लङ्ग छैन र ?
जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेर सरकारले मात्रै विकास गर्दा लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ त ? लक्ष्य प्राप्त हुने भएको भए लोडसेडिङ अन्तको साझेदार निजी क्षेत्र किन हुनुपर्थ्यो । जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई किन प्रवेश गराइयाे ? आखिर सरकारले १०८ वर्षसम्म नगरेको काम निजी क्षेत्रले २५-२६ वर्षमा गरेर देखाइसकेको छ । अब पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई अवमूल्यन गर्यो भने राष्ट्रको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन बेर लाग्दैन । निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा गरेको योगदानको कदर हाेस् । सरकार र निजी क्षेत्रकाे सहकार्यबाट देश विकासको मार्ग सुनिश्चित गरे यसैमा सबै नेपालीको कल्याण देखिन्छ ।